Idolophu yam encinci eneMillion yeDola yokuJonga uMlambo
Kutshanje kwenziwe ngokutsha entliziyweni yesithili sembali saseMaysville Ky kunye neetoni zembali kumgama wokuhamba. Ikhaya elitofotofo losapho elineembono ezintle zomlambo kunye nokufikeleleka kwimidlalo yomlambo kunye nembali.
Ngokwesiqhelo sisuka kwindawo kwaye sipakishe ikhaya lethu ngembali yasekhaya kunye nezikhumbuzo zaseMaysville zisuka kule dolophu intle yomlambo. Kutshanje songeze iBha yekofu yeendwendwe kunye neentlobo ngeentlobo zekofu, iti kunye nekoko ukuze uyonwabele.
Ubumelwane bethu buxakekile emini kodwa kumnandi kwaye kunoxolo ebusuku unokuva ikloko yewotshi yechruch kwiiyure.
Sifumaneka ngokubhaliweyo okanye ngefowuni ngoku sihlala eLexington, Ky kwaye sisebenzise eli khaya kutyelelo losapho.